Myat Shu - 2012 August
You are here : Myat Shu » Archives for August 2012
တောပုန်းကြီး “ယားနို့ရှိခ်” – ပိုလန်ဒဏ္ဍာရီ
Published By Myat Shu On Tuesday, August 28th 2012. Under ပုံပြင်, ဘာသာပြန်, မျက်ရှု
Janosik ဟိုရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ကွယ်။ ဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့ စလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံနဲ့ ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ နယ်ခြားဒေသဖြစ်တဲ့ “တတ်(သ်)သရာ”တောင်တန်းဒေသမှာ ပိုလန်လူမျိုးတွေ နေကြသတဲ့။ အဲဒီဒေသမှာ နေကြတဲ့ ပိုလန်လူမျိုး လယ်သမားတွေဟာ သိပ်ပြီးတော့ ဆင်းရဲတာပဲတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာ မြေရှင်ကြီးတွေက မြေခွန်တွေ မတရား တောင်းလို့တဲ့။ မြေခွန်မြေခ၊ သီးစားခတွေ သိပ်ပြီး ဈေးကြီးလွန်းတယ်ဆိုတာကို လယ်သမားတွေ သိပေမယ့်လည်း ဒီ မိရိုးဖလာ လယ်လုပ်ငန်းအပြင် တခြားအလုပ် မလုပ်တတ်တော့ မြေရှင်ကြီးတွေကို အောင့်အီးသည်းခံ ပေါင်းပြီးတော့ ထမင်းတစ်လုပ်အတွက် ခဲခဲယဉ်းယဉ်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာပဲပေ့ါ။ ထမင်းတစ်လုပ် တုတ်တစ်ချက် ဆိုသလိုပေ့ါကွယ်။ မြေရှင်ကြီးတွေက သိပ်ဆိုးတာပဲ။ ပိုက်ဆံကလဲ ချမ်းသာတော့ ကြေးစားစစ်သားတွေကို ငှားထားနိုင်တာပေါ့။ မြေခွန် မပေးနိုင်တဲ့ လယ်သမားတွေကို ကြေးစားစစ်သားတွေ လွှတ်ပြီး အရိုက်ခိုင်းလို ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, August 28th 2012. Under မျက်ရှု, အက်ဆေး
ပန်းချီပြပွဲ ခန်းမ၏ နောက်ဘက်တစ်နေရာမှာ ရုံးစုထိုင်နေကြသော ကျွန်တော်တို့ ပန်းချီဆရာတစ်သိုက်မှာ အပြင်ဘက်မှ ခြေထောက်များ ရွေ့လျား သွားလာနေကြပုံကိုသာ တွေ့မြင်နေရလေ၏။ ပန်းချီကား များကိုကား ဘုတ်ပြားများပေါ်သို့ ချိတ်ဆွဲပြီး ၀င်လာသူ ပွဲကြည့် ပရိသတ်တို့ဘက်သို့ မျက်နှာမူထား၍ ဖြစ်လေသည်။ * ပန်းချီကားတစ်ချပ် ဖြစ်တည်လာဖို့ ရင်နှင့် ရင်းဖွဲ့လျှင် အချိန် အတော်ကြာတတ်လေသည်။ ကျွန်တော် ပန်းချီကျောင်းတက်စဉ်က ဆရာကြီး ဦးမြတ်ကျော်၏ ပန်းချီကားတစ်ချပ် အကြောင်းကို တွေးနေမိပါသည်။ ပန်းချီကျောင်းတက်ရန် အင်တာဗျူး ဖြေစဉ်ကတည်းက ထိုပန်းချီကားကို ရေးလက်စဖြင့် ဆရာကြီး ရုံးခန်းထဲမှာ မြင်ရသည်။ မြတ်စွာဘုရား ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်တော်မူခန်း ပန်းချီကား ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ဦးမြတ်ကျော်သည် စိမ်းပြာညို့ အရောင်များကို အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ရေးချက်ရေးလက် ... Continue Reading
၀ါဆောမြို့ပန္နက်ခန်း – ပိုလန်ဒဏ္ဍာရီ
Published By Myat Shu On Monday, August 27th 2012. Under ပုံပြင်, ဘာသာပြန်, မျက်ရှု
The Legend of The Warsaw Mermaid ဟိုရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ကွယ်။ မာ့ဇိုဖျုန်နယ်စား မင်းသားလေးဟာ သူ့ရဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကို ခေါ်ပြီးတော့ တောကစားထွက်သတဲ့။ တောကစားထွက်တယ်ဆိုတာ တောထဲဝင်ပြီးတော့ အမဲလိုက်တာကို ပြောတာပေါ့ကွယ်။ မင်းသားလေးနဲ့ သူ့နောက်လိုက်တွေဟာ တောထဲကို ၀င်လာရင်း တောက တစ်စထက် တစ်စ နက်သထက် နက်လာတာကို သတိထားမိသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ မင်းသားလေးနဲ့ သူ့နောက်လိုက်တွေဟာ တောအုပ်ကြီး တစ်ခုထဲကို ရောက်သွားတော့ မကောင်းဆိုးရွာ တောကောင်ကြီး တစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်သတဲ့။ မကောင်းဆိုးရွား တောကောင်ကြီး ကိုယ်ပေါ်မှာ အမွှေး အရှည်ကြီးတွေ ဖုံးလို့တဲ့။ နောက်ပြီးတော့ ရှေ့လက်ကြီး နှစ်ချောင်းကလည်း ရှည်လိုက်တာ မြေကြီးကို ထိနေတော့တယ်။ လက်သည်းကြီးတွေကလဲ အရှည်ကြီးနဲ့။ ပါးစပ်ထဲကနေ ... Continue Reading
ကျီးကန်းမင်းသားလေးနဲ့ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့မင်းသမီးလေး – ပိုလန်ဒဏ္ဍာရီ
Published By Myat Shu On Sunday, August 26th 2012. Under ပုံပြင်, ဘာသာပြန်, မျက်ရှု
The Crow and The Little Princess – Polish Fairy Tale ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ပိုလန်ပြည်ရှင့် မင်းတြားကြီးမှာ သမီးတော် သုံးပါး ရှိသတဲ့။ မင်းသမီးလေးတွေဟာ ငယ်ကလဲငယ်၊ ချောကလဲချောဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ဖခမည်းတော် ရှင်ဘုရင်ကြီးနဲ့ မယ်တော် မိဖုရားကြီးက တုန်နေအောင် ချစ်ကြတာပေါ့။ သူတို့ သုံးယောက်ကို ချစ်လွန်းတော့ အစစ အရာရာ အလိုက်လိုက် အကြိုက်ဆောင် ထားသတဲ့ကွယ်။ မင်းသမီးလေး သုံးယောက်မှာ အထွေးဆုံး မင်းသမီးလေးဟာ သူ့ အစ်မတော် မင်းသမီးကြီးတွေလောက် မချောပေမယ့် စိတ်ကောင်း ရှိသတဲ့။ သိပ်ပြီး နူးညံ့တယ်။ သူတစ်ဖက်သားကိုလည်း ကြင်နာတတ်တယ်။ သိပ်ပြီး သနားတတ်တယ်။ ဒီတော့ကာ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, August 26th 2012. Under မျက်ရှု, သူတို့အာဘော်
ဒီနေ့မနက်တော့ မနေ့ကလောက် အိပ်ရာထမစောပေမယ့် အရင့်အရင်နေ့တွေကထက်တော့ စောနေပါသေးတယ်။ နံနက် ၅း၁၂ နာရီ....။ ဘလော့ဂ်တွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဟာ သူရေးတဲ့ စာကို လူဘယ်နှစ်ယောက်ဖတ်နေသလဲဆိုတာထက် သူ့ကို လူဘယ်နှစ်ယောက် ဆဲသွားသလဲ ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတတ်ပါသတဲ့။ ဟိုတစ်နေ့က သူ့ရဲ့ စီဘောက်စ်ထဲမှာ ရေးသွားတဲ့ မိတ်ဆွေတစ် ယောက်က သူ့ကို ခပ်စပ်စပ်လေးလုပ်လိုက်သလို “သဘောပါရဲ့လားဟေ့” လို့ သူ့ကိုယ်သူပဲ မေးလိုက် ပါတော့တယ်။ “သဘောပါရဲ့လား” ဆိုတဲ့ စကားကို သူက ရင်းနှီးနေတာ ကြာပါပြီ။ မိုးကုတ်ဆရာတော် ကြီးရဲ့လက်သုံးစကားပါ။ငယ်ငယ်ကိုရင်ဘ၀ထဲက ဆရာဘုန်းတော်ကြီးက ပရိယတ်စာပေပို့ချမှုကနေ ပဋိပတ် နယ်ကို ကူးပြောင်းသွားတဲ့အခါ မိုးကုတ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ သူတို့နေတဲ့ ကျောင်းလေးထဲ ရောက်လာပါတော့တယ်။ ကြက်တူရွေးက တော်တော် မယ်ဘော်က ... Continue Reading
ညီနောင်သုံးယောက် – ပိုလန်ဒဏ္ဍာရီ
Lech, Czech, Rus and the White Eagle, as painted by Walery Eljasz-Radzikowski (1841–1905) လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် လောက်တုန်းက ပိုလန်နိုင်ငံက ဗစ္စတူလာ မြစ်ဝနားမှာရှိတဲ့ နယ်မြေဒေသကြီးမှာ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါး နန်းစံတော်မူသတဲ့။ ဘုရင်ကြီး နတ်ရွာစံတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ့ရဲ့ သားတော်သုံးပါးဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီးလား၊ မင်းသားလတ်ချက်နဲ့ မင်းသားငယ်ရူးစ်တို့ဟာ ဖခမည်းတော် ရှင်ဘုရင်ကြီး ပိုင်စိုးတဲ့ နယ်မြေကို အမွေခွဲယူဖို့ လုပ်ကြတာပေါ့။ ခက်တာက သူတို့ရဲ့ဖခမည်းတော် ရှင်ဘုရင်ကြီး ပိုင်တဲ့ နယ်မြေဟာ သူတို့ ညီနောင် သုံးယောက် ဖို့တူဖို့မျှ ခွဲဝေယူဖို့ရာ သိပ်ပြီး ကျဉ်းမြောင်းလွန်းနေသတဲ့။ ဒီတော့ကာ မင်းသား ... Continue Reading
သူကောင်း၊ သူယုတ် – သားသို့ပေးစာ (၈)
Published By Myat Shu On Saturday, August 25th 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေး ရဲဝဏ္ဏ သားလေး တဖြေးဖြေး အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ သားမှာ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရလာပြီပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အနေအေးသူ၊ အကြွားပိုသူ၊ သူများမကောင်း ကိုယ်ကောင်းကြောင်း ပြော တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုဖော် မသူတော်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်သူ စသဖြင့် သားလေး တွေ့နေရပြီပေါ့။ သားလေးရော ဘယ်အမျိုးအစားထဲ ပါလေမလဲ။ သူကောင်းနဲ့ သူယုတ် နှစ်မျိုးခွဲထားတဲ့အကြောင်း ဖေဖေပြောပြမယ်။ ဖေဖေတို့သားတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက သပ္ပုရိသသုတ်မှာ သူတော်ကောင်းအင်္ဂါ ၄ ပါးနဲ့ သူယုတ်အင်္ဂါ ၄ ပါးကို ဟောပြောခဲ့တယ်။ သူတော်ကောင်းအင်္ဂါ ၄ ပါး က (၁) သူတစ်ပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့ကို မမေးလျှင် မပြော၊ မေးလျှင်ချဲ့ကား၍ မပြောဘဲ လျှော့ပေါ့၍ ပြော ခြင်း။ ရှင်းပါတယ် သားရယ်...သူတစ်ပါးအပေါ် ကိုယ်ထားခဲ့တဲ့ ... Continue Reading
ပါးချိုင့်ကလေး၊ ဆို – တက္ကသိုလ်ဖေစန်း
Published By Myat Shu On Friday, August 3rd 2012. Under မျက်ရှု, သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်
httpv://www.youtube.com/watch?v=Z9swGBNJ2o8&feature=plcp ပါးချိုင့်ကလေးကို ၀ိုင်အမ်ဘီဆရာတင်ရေးပြီး တက္ကသိုလ်ဖေစန်း (စန်းသော်တာ) ဆိုပါတယ်။ ဓာတ်ပြားအမှတ် A.I.F.27. 1939 January ပါ။ စန်းသော်တာ အမည်နဲ့ တက္ကသိုလ်ဖေစန်း ရေးတဲ့ သီချင်းတွေ တော်တော်များများကို နားထောင်ဖူးပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့ သီချင်းကတော့ “ပါးချိုင့်ကလေး”နဲ့ “တို့မြေဆီ” နှစ်ပုဒ်ပဲ နားထောင်ဖူးပါတယ်။ ဦးသုခအသံနှင့် ဆင်သယောင်ယောင် ရှိတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကတော့ သီချင်းဆိုသူအဖြစ်ထက် သီချင်းရေးသူအဖြစ် ပိုလူသိများ ထင်ရှားပုံပါပဲ။ တေးရေးသူ စန်းသော်တာအဖြစ် သူရေးတဲ့ သီချင်းတော်တော်များများက နာမည်ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့တာကိုး။ စန်းသော်တာ ရေးတဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ ကျွန်မ နှစ်သက်မိတာတွေက မေရှင်နဲ့ ဘိလပ်ပြန်သန်းတို့ သီဆိုသွားတာတွေပါပဲ။ “မြပန်းခွေ”၊ “ရွှေဝါဖူး”၊ “မြတ်လေးငုံ” တို့၊ “လဲ့လဲ့ဝင်း” ... Continue Reading
ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတဲ့ မြေကြီးနဲ့ ကျောက်ခဲကလေးတွေ
Published By Myat Shu On Thursday, August 2nd 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
သူတို့ အညာမှာ မိုးက ခေါင်သလောက် ဟောဒီ အကြေမှာ မိုးတွေက ရွာလှပါလား။ တစ်ခါတစ်လေ ရွာလိုက်တာမှ ရေအပြည့်နဲ့ ဧရာမ မိုးဗြဲဒယ်အိုးကြီးကို သွန်မှောက်ချလိုက်သလိုပဲ။ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရေတွေမှာ ကျန်ရစ်ကြသေးရဲ့လားလို့ ထင်ရလောက်အောင်ကို ရွာတာ။ အညာသားဖြစ်တဲ့ သူဟာ အကြေမိုးနဲ့ နေသားတကျ မဖြစ်ခင်မှာ အတော် နေရခက်တယ်။ ပြီးတော့ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာနေရချိန်ဆိုတော့ တိမ်ညိုတိမ်မည်းတွေကလည်း အလွမ်းတိမ်ဖြစ်ကြ မိုးရေစက်တွေကလည်း အလွမ်းမိုးစက်တွေ ဖြစ်နေကြတော့တာပေါ့။ တော်ပါသေးရဲ့။ မိုးရေတွေကြောင့် မြေပြင်ဟာ ဗွက်ထ မနေရစ်ဘဲ၊ အလိုက်သင့် စီးဆင်းသွား၊ အလျားသင့် စိမ့်ဝင်သွားပေလို့။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်မြင်ရသမျှ အရောင်အဆင်းဆိုလို့ သုံးမျိုးသုံးစားပဲ မြင်တွေ့နေရတာကိုတော့ သူ စိတ်ပျက်မိတယ်။ ... Continue Reading